Daawo: Cudubto ka tirsan Ciidamada Xoogga Dalka oo Tababar loogu soo xiray Magaalada Muqdisho – Kismaayo24 News Agency
Daawo: Cudubto ka tirsan Ciidamada Xoogga Dalka oo Tababar loogu soo xiray Magaalada Muqdisho
by admin 22nd February 2018 042
Wasiirka Gaashaandhiga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan ayaa magaalada Muqdisho maanta tababar ugu soo xiray Cutubyo ka tirsan Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan Ururka 60-aad ee ilaalada madaxtooyada Soomaaliya.
Tababarkaan oo mudo 90-cisho ah socday ayaa Ciidanka ka faa’ideystay oo gaarayay 130-askari,waxaana inta uu socday lagu barayay tababar la xiriira howlaha Waajibaadkooda ciidanimo iyo siday uga soo dhalaali karaan howlaha loo igmaday.
Goobta tababarka loogu soo xirayay Ciidamada ayaa waxaa ku sugnaa Wasiirka Gaashaandhiga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya,Taliyaha Ciidamada Ururka 60-aad ee ilaalada Madaxtooyada Soomaaliya Gaashaanle sare Cali Maxamed Ali afcadey,Abaanduulaha Ciidanka Xoogga dalka Generaal C/llaahi Cali Caanood iyo Saraakiil ciidan,kuwaasi oo dhamaantood ciidanka tababarka dhameystay ku amaanay dhabarka adeega ay muujiyeen mudada uu socday.
Ugu horeyn ayaa goobta waxaa ka hadlay Taliyaha Ciidamada Ururka 60-aad ee ilaalada madaxtooyada Gaashaanle Sare Cali Maxamed Ali Afcadey,wuxuuna askarta tababarka dhameystay ku amaanay dadaalka ay muujiyeen mudadii uu tababarka socday.
Abaanduulaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal C/llaahi Cali Caanood oo madasha ka hadlay ayaa Yiri” Waxaa naga go’an xoojinta iyo dhismaha Ciidanka Xoogga dalka,Ururka Ciidanka ilaalada madaxtooyada waxaan gaarsiin doonaa heer aad u sareeya si ay madaxda Qaranka amaankooda u sugaan”.
Ugu danbeyntii,Wasiirka Gaashaandhiga Dowladda Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan oo soo xiray Tababarka ayaa bogaadiyay dhabarka adeega Ciidanka ay muujiyeen mudada tababarka uu socday,isagoona tababar kale goobta uga furay Ciidan kale oo ka tirsan Ururkaasi.
Ururka 60-aad ee Ciidanka ilaalada madaxtooyada oo ah Ciidan gaar u ah ilaalinta madaxtooyada iyo madaxda Qaranka ayaa lagu xusuustaa doorka ay ka qaateen socdaalkii Nabada uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka uu ku tagay Maamulada Puntland iyo Galmudug,kuwaasi oo si weyn u sugayay amaanka Wafdiga madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxame C/llaahi Farmaajo.
DAAWO: Faadumo Dayib oo Haweenka ugu baaqday in ay Guryaha ka soo baxaan
Sawirro: Ra’iisul Wasaare Khayre oo ka qeyb galay Xuska Sannad guuradii 48-aad ee Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed.
DEGD DEG: Feeryahanka Caanka ah ee Maxamad Cali Kalaay oo Geeriyooday
Tifaftiraha K24 4th June 2016
Dowladda oo ka hadashay dadkii loo qab qabtay Qaraxii Hotelka SYL
admin 10th March 2015 28th August 2015
israa,iil maxay ka dhaheen Diyaaradaha Dagaalka Ruushka ee sida qaldan ugalay dhulka ay heysteen
admin 30th November 2015